Ibhola Valve, Hlola Valve, Isango Valve - Newsway
API602 kokuzihlanganisa Steel Valve
Amakhemikhali kanye nePetrochemical
Indawo Yokuhluza I-Petroleum
Izimboni zePulp kanye nePhepha
KAKHULU STEEL valve
Sisebenza ngokukhethekile kuma-valves ebhola, ama-valve esango, ama-valve wokuhlola, i-globe valve, ama-butterfly valve, ama-plug valve, i-strainer, ama-valve wokulawula. Imikhiqizo
I-API 6D, i-API 607, i-CE, i-ISO9001, i-ISO14001, i-ISO18001, i-TS. (Uma udinga izitifiketi zethu, sicela uxhumane nathi sales@nswvalve.com )
I-API 602 globe valve
BS 1868 Swing HLOLA IVEKI
I-API 600 Gate Valve
I-API 594 Hlola Valve
I-API 602 swing check valve
Izimboni ze-Pulp nePhepha
IZIMBONI ZAMAPULPI NEPHEPHA
INewway Valve Co, Ltd ingumkhiqizi wamavaluva wezimboni osebenza futhi othumela kwamanye amazwe iminyaka engaphezu kwengu-20 umlando, futhi inama-20,000㎡ eworkshop ehlanganisiwe. Sigxila ekwakhiweni, ekuthuthukiseni, ekwenziweni. INewway Valve iqinile ngokuya ngohlelo lwekhwalithi yamazwe omhlaba i-ISO9001 yokukhiqiza. Imikhiqizo yethu iphethe izinhlelo zokuklama ezisizwa ngamakhompiyutha nezinsimbi eziyinkimbinkimbi zekhompyutha ekukhiqizeni, ekucubunguleni nasekuhloleni. Sineqembu lethu lokuhlola ukulawula ikhwalithi yama-valve ngokuqinile, ithimba lethu lokuhlola lihlola i-valve kusukela ekubunjweni kokuqala kuya kwiphakheji yokugcina, baqapha yonke inqubo ekukhiqizeni. Futhi sibambisana nomnyango wesithathu wokuhlola ukusiza amakhasimende ethu ukuthi abheke ama-valve ngaphambi kokuthunyelwa.
UMKHIQIZO WAMALUNGELO WOKUGCINA UHLELO LWE-ISO9001 QUANLITY CONTROL IQEMBU LOKUFUNDELA EMVA KOKUTHENGISANA NGOKUTHENGISWA
Professional valve umphini
INewwayway Valve Company isebenze ekukhiqizeni i-valve iminyaka engaphezu kwengu-20 futhi inolwazi oluningi ekuklanyeni nasekukhiqizeni i-valve. Inkampani yethu igcina imishini yokukhiqiza nokucubungula ivuselelwa njalo ukuqinisekisa ukunemba kokusebenza komkhiqizo nokusebenza kahle.
Uhlelo oluqinile lokulawula ikhwalithi
Ngokuya ngohlelo lokuphathwa kwekhwalithi ye-ISO9001, iNewsway Valve Company ilawula ngokuqinile zonke izinyathelo kusuka ekusakazweni kwevalve kuya ekuhlanganiseni ukuya emhlanganweni, ukupenda, nokupakisha ukuqinisekisa ukuthi ama-valve athunyelwa efektri afaneleka ngo-100%.
INewwayway Valve Company ifakwe umnyango wezokukhiqiza, umnyango wezobuchwepheshe, umnyango wezokuthengisa, umnyango wekhwalithi, umnyango wezincwadi, umnyango wezezimali kanye nomnyango ngemuva kokuthengisa ukukhonza amakhasimende kangcono futhi ngokushesha.
Ukuzinikela kwangemva kokuthengisa
INewwayway Valve Company ithembisa ukuthi: Uma amakhasimende ethola izinkinga zekhwalithi yomkhiqizo, sizosiza amakhasimende ukuhlinzeka ngezinsizakalo zokulungisa noma zokufaka ezinye mahhala. Siza amakhasimende ukubhekana nezinkinga ngokushesha
I-Wenzhou watts Valve Co., Ltd
Ukulondolozwa nokushintshwa kwe-API 600 G ...
Ungazikhetha kanjani izinto ze-valve ngaphansi ...
Isimiso sokusebenza se-valve yebhola kagesi
Newsway Valve lokushisa High ibhola valve
Imakethe ye-valve yezimboni isesimweni esihle ...
Ikheli: IDongOu Industrial Zone, i-Oubei Yongjia Wenzhou Idolobha, iZhejiang China-325105
I-WENZHOU NEWSWAY VALVE CO., LTD. © Copyright - 2010-2022: Wonke Amalungelo Agodliwe. Hot Products - Ibalazwe